တစ်ပတ်အတွင်းအမေးများဆုံးမေးခွန်းများ – အပတ်စဉ် ၁၃
17 Feb 2018 . 5:28 PM
#1 Facebook Application ကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ App တွေကနေတစ်ဆင့်အသုံးပြုသင့်သလား ?
လုံခြုံရေးအရ ဆိုရင်တော့ မသုံးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Facebook ကုမ္ပဏီက Facebook နဲ့ Facebook lite ဆိုပြီး App ၂မျိုးကိုတရားဝင်ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ အခြား ပုံစံတူတွေ အရောင်မတူတာတွေကတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Facebook အသုံးပြုသူတွေက ပြန်လည်ပြုပြင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်သူက မရိုးသားတဲ့နည်းလမ်းတွေထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့အကောင့်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook ကနေတရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ App တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင် မသုံးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
#2 Play Store မှာ Application ကိုမြင်ပြီး Download လုပ်လို့မရခဲ့ရင် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လို Download လုပ်လို့ရမလဲ ?
ခုလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ အဆိုပါ App ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးပြုခွင့်မပေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ နှစ်နည်းရှိပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းကတော့ VPN ကိုသုံးပြီး Download ဆွဲနည်းပါ။ ဒုတိယနည်းကတော့ www.apkmirror.com မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ App ကိုရှာပြီး Download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
#3 MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ဖုန်းလိုင်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာအပြည့်အစုံရယူနိုင်မယ့် Application
MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ဖုန်းလိုင်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာအပြည့်အစုံရယူနိုင်မယ့် Application ကတော့ MyanSIM ဆိုတဲ့ Application ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App ကနေပြီးတော့ ဖုန်း Operator ၃မျိုးလုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Service ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလည်း ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အပြင် File size ကလည်း 6MB လောက်တာရှိတာကြောင့် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
#4 Android စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနိုင်မယ့် နည်းပညာသတင်း website ၂ခု
Android စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို Up-to-Date ရရှိနိုင်မယ့် website တွေကတော့ www.gsmarena.com နဲ့ www.androidauthority.com မှာ အကောင်းဆုံးလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
#5English-Myanmar Dictionary ကောင်းတာလေးဘာရှိမလဲ ?
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ Shwe Book Dictionary ပါပဲ ။ ဖုန်းမှာ Zawgyi font မရှိရင်တောင် အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ကိုယ့်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဖောင့်ကို တစ်ကြိမ်သာ ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ သဘောကျစရာအချက်တစ်ခုကတော့ မိမိရှာခဲ့သမျှ Meaning History တွေကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးလေ့လာနိုင်တာပါပဲ။
#1 Facebook Application ကိုတရားဝငျမဟုတျတဲ့ App တှကေနတေဈဆငျ့အသုံးပွုသငျ့သလား ?
လုံခွုံရေးအရ ဆိုရငျတော့ မသုံးတာအကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ Facebook ကုမ်ပဏီက Facebook နဲ့ Facebook lite ဆိုပွီး App ၂မြိုးကိုတရားဝငျထုတျပေးထားပါတယျ။ အခွား ပုံစံတူတှေ အရောငျမတူတာတှကေတော့ ကြှမျးကငျြတဲ့ Facebook အသုံးပွုသူတှကေ ပွနျလညျပွုပွငျဖနျတီးထားတာဖွဈပွီး ပွနျလညျပွုပွငျသူက မရိုးသားတဲ့နညျးလမျးတှထေညျ့သှငျးထားမယျဆိုရငျ မိမိရဲ့အကောငျ့အတှကျဆိုးကြိုးတှမြေားစှာဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Facebook ကနတေရားဝငျထုတျပေးထားတဲ့ App တှမေဟုတျဘူးဆိုရငျ မသုံးတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
#2 Play Store မှာ Application ကိုမွငျပွီး Download လုပျလို့မရခဲ့ရငျ အလှယျဆုံးနညျးလမျးနဲ့ဘယျလို Download လုပျလို့ရမလဲ ?
ခုလိုဖွဈရတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ အဆိုပါ App ကိုကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာအသုံးပွုခှငျ့မပေးသေးတဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ နညျးလမျးကတော့ နှဈနညျးရှိပါတယျ။ ပထမတဈနညျးကတော့ VPN ကိုသုံးပွီး Download ဆှဲနညျးပါ။ ဒုတိယနညျးကတော့ <a href=”http://www.apkmirror.com/” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>www.apkmirror.com</a> မှာ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ App ကိုရှာပွီး Download ရယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
#3 MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ဖုနျးလိုငျးတှရေဲ့ဝနျဆောငျမှုအားလုံးကို တဈနရောတညျးမှာအပွညျ့အစုံရယူနိုငျမယျ့ Application
MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ဖုနျးလိုငျးတှရေဲ့ဝနျဆောငျမှုအားလုံးကို တဈနရောတညျးမှာအပွညျ့အစုံရယူနိုငျမယျ့ Application ကတော့ MyanSIM ဆိုတဲ့ Application ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ App ကနပွေီးတော့ ဖုနျး Operator ၃မြိုးလုံးလုံးနဲ့ပတျသကျတဲ့ Service ဝနျဆောငျမှုအားလုံးကိုရယူနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ အသုံးပွုရတာလညျး ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့အပွငျ File size ကလညျး 6MB လောကျတာရှိတာကွောငျ့ ဆောငျထားသငျ့တဲ့ Application တဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။
#4 Android စမတျဖုနျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီးလလေ့ာနိုငျမယျ့ နညျးပညာသတငျး website ၂ခု
Android စမတျဖုနျးတှနေဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးတှကေို Up-to-Date ရရှိနိုငျမယျ့ website တှကေတော့ <a href=”http://www.gsmarena.com/” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>www.gsmarena.com</a> နဲ့ <a href=”http://www.androidauthority.com/” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>www.androidauthority.com</a> မှာ အကောငျးဆုံးလလေ့ာဖတျရှုနိုငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
#5English-Myanmar Dictionary ကောငျးတာလေးဘာရှိမလဲ ?
လကျရှိမွနျမာနိုငျငံအတှကျ အကောငျးဆုံးကတော့ Shwe Book Dictionary ပါပဲ ။ ဖုနျးမှာ Zawgyi font မရှိရငျတောငျ အဆငျပွပွေအေသုံးပွုနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ အသုံးပွုသူအနနေဲ့ ကိုယျ့အတှကျ မှနျကနျတဲ့ဖောငျ့ကို တဈကွိမျသာ ရှေးခယျြပေးဖို့လိုပါတယျ။ သဘောကစြရာအခကျြတဈခုကတော့ မိမိရှာခဲ့သမြှ Meaning History တှကေို အခြိနျမရှေး ပွနျလညျကွညျ့ရှုပွီးလလေ့ာနိုငျတာပါပဲ။